सरकारकार सबै नेपाली जनताको अभिभाकत्व ग्रहण गर - edChitwan
सत्ताको पार्टी हो भन्दैमा सरकार कसैको पेवा हैन !? सरकार पनि त अफ्नो निजि हैन, सरकारले नि त जनताको लागि केही सोचेको होला नि ?? आज सरकार कुनै पार्टी को हो भनेर बिद्रोह नगर्दा हुन्छ !! के था भोलि आफ्नो पालो आउन सक्छ ?? के तेति बेला तिमी हरुले सबै जनताको खुसी दिन सक्छाै ??
अहिले पार्टी को बिरोध गर्दै झगडा गर्नु भन्दा नि गरिब,दुखी, खान नपाएका जनतालाई केही सहयोग गर्नुहोला ।
चुनावको बेलामा फ्री (Free) मा टीसर्ट (T-shirt) र अफ्नो पार्टी को लागि झन्डा बाड्दै हिड्ने हरुले अहिलेको अबस्थामा एउटा माक्स अनि एक बोरा चामल, एक पोका तेल बाड्ने हिम्मत भएन अझ पार्टी अनि सत्ताको नारा अनि जुलुस बोकि हिडेका छन् !!??
के सरकार को सत्ता मा रहेको जनताले मात्रै राहत पाएका छन् त ?? के सरकारका पार्टी को जनतालाई लकडाउन गरिएको छैन र ?? धनी-गरिब नभएर अहिले सिङ्गो नेपाल यो कोभिड -19 बाट दुख पाएका छन् । यो बेला भनेको त सिङ्गो नेपाल एक जुट भएर यस् कोभिड-19 को माहामारी बाट आफू, अफ्नो परिवार अनि पुरै देश लाई बचाउने हो ।
कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर अनि नारा, जूलूस बाल्दैमा रोगिले न्याय पाउदैनन्। सक्नुहुन्छ त सरकार अनि नेपाल स्वास्थ सेवालाई सहयोग गर्नुस् , यदि सक्नुहुन्न त एस्ता अनैतिक कार्य गरि समाजमा बिसङ्गति नफैलाइदिनु होला।कोभिड-19 बाट अफु पनि बचउँं अरुलाई नि बचाउँं।
हामी नेपाली – प्रबिन शर्मा (भट्टराई )
प्रकाशित : १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार